ဓမ္မရိပ်လွှမ်းသဖြင့် ကပ်ဘေးကင်းသည့် တိုင်းပြည် - Myanmar Express
March 9, 2020 By Myanmar Express in တရားအဆုံးအမများ No Comments Tags: ကပ်ဘေး
ယခုအချိန်၌ တရုပ်ပြည် ဝူဟန်မြို့မှ စတင်ခဲ့သော corona virus ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး ချောက်ချားနေကြရပြီ ။
တရုပ်ပြည်တွင်သာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၇၀ ကျော်အထိ ရောဂါပိုးက ပျံနှံ့နေပြီး ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး Pendamic disease အသွင်ပြောင်းလာနေပြီ ။ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး pendamic တစ်ခုအဖြစ် ကမ္ဘာကြီးကို ခြိမ်းခြောက်နေပြီဖြစ်သည်
။မြို့တွေပိတ် ၊ ကျောင်းတွေပိတ်နှင့် ရောဂါကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြရသည် ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း ရပ်တန့််ကုန်ကြပြီ ။ ရောဂန္တရကပ်နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် စီးပွားပျက်ကပ် ၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသည့် ဒုဗ္ဘိက္ခ န္တရကပ် လာလိမ့်ဦးမည် ။ ငတ်လာကြလျှင် ကမ္ဘာမီးလောင် သားတောင်ချနင်းဆိုသည့်အတိုင်း လုယက်သတ်ဖြတ်ကြလိမ့်ဦးမည် ။
ထိုအခါ စစ်မက်ဘေးအန္တာရာယ် သတ္တန္တရကပ် လာလိမ့်ဦးမည် ။ ထိုကြောက်စရာကပ်ဆိုးကြီးတွေ၏ အရိပ်မည်းကြီး လူသားတွေအပေါ် လွှမ်းခြုံစပြုလာပြီ ။
ထိုကပ်ဆိုးကြီးများမှ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ မိမိတို့အားလုံး သတိရှိဖို့လိုသည် ။ ရောဂါဖြစ်ခြင်း ၊ စီးပွားပျက်ခြင်း ၊ သေဆုံးရခြင်း တို့သည် ဘဝများစွာက မိမိတို့ပြုလုပ်ထားခဲ့သော အပရာပရိကကံတွေကြောင့်ဖြစ်သည် ။ နောက်မှအရိပ်လိုလိုက်နေသည့် ထိုကံများကို့တားနိုင်မှဖြစ်မည် ။
ထိုကံများကို တားနိုင်သည်က ဝိပဿနာအားထုတ်သည့် ”ပထမဇော”ဟု မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးက ဟောကြားခဲ့သည် ။ ပထမဇောထဲတွင် ကံလည်းပါသည် ၊ ဉာဏ်လည်းပါသည် ။
ထိုကံ ၊ ဉာဏ်တို့ဖြင့် နောက်ကလိုက်လာသည့် ကံတွေကို တားနိုင်သည်ဟု ဆရာတော်ဘုရားကြီး အမိန့်ရှိဖူးသည် ။ ထို့ကြောင့် ကပ်ဆိုးကြီးများမှ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ ဝိပဿနာတရား အားထုတ်ကြပါဟု တိုက်တွန်းချင်သည် ။
ယခုအခါ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်က တကမ္ဘာလုံးနီးပါး ပျံနံှံ့နေပြီ ။ စင်္ကာပူ ၊ ကိုးရီးယား ၊ ဂျပန်နိုင်ငံများဆီ ရောဂါပိုးများ ရောက်သွားသည့် အပြင် အီရန်ကျန်းမာရေး ဒုဝန်ကြီး ၊ အီရန်ဒုသမ္မတတို့ကိုပါ ချမ်းသာမပေး ။
တရုပ်နှင့် အဆက်အဆံမရှိသည့် အီတလီထိလည်း ခရီးဆန့်သွားကြပြီ ။ သို့ပေမဲ့ ကီလိုမီတာ နှစ်ထောင်ကျော် နယ်နိမိတ်ချင်း ဆက်စပ်နေပြီး တရုပ်လူမျိုးတွေနှင့် ထွေးရောယှက်တင် ကူးလူးဆက်ဆံနေကြသည့် တရုပ်နှင့် အိမ်နီးချင်း မိမိတို့နိုင်ငံမှာတော့ ရောဂါကူးစက်သည်ကို မကြားရသေး ။
ပထမတော့ မြန်မာပြည်တွင် သေသေချာချာ တိတိကျကျ တိုင်းတာနိုင်သည့် ပစ္စည်းကရိယာများ မရှိသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း ၊ဆေးပညာကျွမ်းကျင်မှု မရှိသောကြောင့် သော်လည်းကောင်း ကူးစက်နေခြင်းကို မသိခြင်းသာဟု ထင်ခဲ့မိသည် ။
သို့ပေမဲ့ ယခုမတ်လထဲရောက်သည်အထိ ရောဂါကူးစက်မှု ၊ သေဆုံးမှုတို့ကို မကြားရသေး ။ အကယ်၍ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၊ သေကြေပျက်စီးမှုသာ ရှိခဲ့လျှင် လင်မယားရန်ဖြစ်သည်ကအစ face book တင်နေသည့် ယခုလို ပွင့်လင်းမြင်သာ မီဒီယာခေတ်ကြီးတွင် face book ပေါ်တွင် ပလူပျံနေလောက်ပြီ။
မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမှ ဖုံးဖိထား၍ ရမည်မဟုတ် ။ အမှန်တကယ် ကူးစက်မှု ၊ ရောဂါကြောင့် သေကြေပျက်စီးမှု မရှိ၍သာ face book ပေါ်တွင် မတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည် ။
UK ၏ နာမည်ကြီးသတင်းစာ The Sun ကလည်း မတ်လ ၃ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကင်းစင်သာ နိုင်ငံအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်သည်ကို ဖတ်လိုက်ရသည် ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကူးစက်ပြန့်ပွားနေပါလျှက် မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ မကူးစက်မပြန့်ပွားခြင်းသည် အလွန်အံသြောစရာ ကောင်းလွန်းသည့် ထူးခြားချက် တစ်ခုဖြစ်နေသည် ။ထိုထူးခြားချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး Kelvin Albert Power ၏ ထင်မြင်ယူဆချက် ( hypothesis) တစ်ခုကို ဖတ်မိလိုက်သည် ။
သူက မြန်မာလူမျိုးတို့၏ သွေးထဲတွင် corona virusကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် antibody တစ်မျိုးမျိုး အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အလိုလိုရှိနှင့်နေသောကြောင့်ဟု ယူဆသည် ။ တခြားလူမျိုးများထံတွင် မတွေ့ရသလောက်နည်းသော်လည်း မြန်မာလူမျိုးတိုင်း၏ သွေးထဲမှာသာလျှင် အများဆုံးတွေ့ရသည့်
( Ede 1-C 10 ၊ Ede2-A11 ၊ Ede2- B7) ဆိုသည့် human antibodies သုံးမျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးကြောင့် corona virusကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိနေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်တဲ့ ။
ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်သည့် မြောင်းပုတ်ရေပုတ်တွေများသည့်် တိုင်းပြည်ဆိုတော့ ခြင်အကိုက်မခံရသည့် မြန်မာလူမျိုးဟုမရှိ ။ ရေဆိုးအိုင်တွေထဲ ပေါက်ဖွားရှင်သန်ကြပြီ
း နေ့ခင်းနေ့လည် ထွက်ကိုက်တတ်သည့် ခြင်ပုန်းများက သယ်ဆောင်လာသည့် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ( Dengue) ရောဂါကို ဖြစ်စေတတ်သော ဗိုင်းရပ်ပိုးလေးမျိုးကို ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက် မြန်မာလူမျိုးများ၏ ခုခံမှုစနစ်ထဲတွင် ထိုantibodies များ ရှိနှင့်နေပြီး ဖြစ်သည်တဲ့ ။
တိုးတက်သည့်နိုင်ငံများ ၊ ရာသီဥတုအေးချမ်းသည့် နိုင်ငံတွေ၌ ခြင်မရှိသောကြောင့် ထိုနိုင်ငံရှိလူများ၏ သွေးထဲတွင် ထိုantibodiesများမရှိ ။ ထို့ကြောင့် တရုပ် ၊ ဂျပန် ၊ အီတလီ ၊ ကိုးရီးယား ၊ အင်္ဂလိပ် ၊အမေရိကန် နိုင်ငံသားများ၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်ထဲတွင် ထို antibodiesများမရှိကြ ။
သို့ပေမဲ့လည်း ခြင်ပေါသည့် တိုင်းပြည်များတွင် နေထိုင်ကြရသည့် မြန်မာ ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှင့် လာအိုလူမျိုးတို့တွင်တော့ အများအပြားရှိသည် ။ ထို့ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး ရောဂါကူးစက်နေသော်လည်း မြန်မာ ၊
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၊ လာအို ၊ ဘရူနိုင်းနှင့် အရှေ့တီမောတို့တွင် ယခုထိရောဂါကူးစက်မှု မရှိသေးခြင်း ဖြစ်သည်တဲ့ ။
ပြီးတော့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်စေသည့် virus နှင့် corona virus နှစ်မျိုးစလုံးသည် single strand RNA virus တွေ ဖြစ်ကြသည်တဲ့ ။ ပြီးတော့ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပရိုတိန်းအမျိုးအစားကလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သွားတူနေပါသတဲ့ ။
သည်တော့ သွေးထဲရှိ antibodies များက ဝူဟန်ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ်လို့ အမှတ်မှားပြီး မှားယွင်းတိုက်ခိုက်မိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ ။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကူစက်ခံရစေဦးတော့
သွေးထဲရှိ antibodiesတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်သေသွားသည့်အတွက် ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မရှိခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်တဲ့ ။ သု့အယူအဆအရဆိုလျှင် ဆင်းရဲသားဖြစ်ခြင်းကိုပဲ ဂုဏ်ယူရတော့မလိုလို ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့အယူအဆသာ မှန်လျှင်တော့ မြန်မာတွေ လက်ခမောင်းခတ်သင့်ပြီ ။တခြားလူမျိုးတွေမှာ မရှိဘဲ မိမိတို့သွေးတွင်းမှာသာ ရှိသည့် antibodies များသည် ဘုရားပေးသည့်ဆုဟု ဆိုရမလိုဖြစ်နေပြီ ။
သို့ပေမဲ့ သူ၏တင်ပြချက်သည် ထင်မြင်ယူဆချက် hypothesis တစ်ခုသာဖြစ်သည် ။ သုတေသနခိုင်ခိုင်မာမာနှင့် တွေ့ရှိချက်တစ်ခု မဟုတ်ပါ ။ အမှန်တရားဟု လှေနံဓားထစ် ယူဆ၍တော့မရပါ ။
ဝမ်းသာစရာဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ငါတို့မကူးနိုင်ဘူးဟု ယူဆကာ ပေါ့ပေါလျော့လျော့ မနေသင့်ပါ ။ မကူးစက်နိုင်ဟုထင်ပြီး ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လျစ်လျူရှုကာ ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေလျှင်တော့ ကံကိုယုံပြီး ဆူးပုံနင်းသလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မည် ။
ထို့ပြင် ထိုယူဆချက်သည် အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိကြောင်း အခြားဆေးသိပ္ပံပညာရှင်တို့၏ ချေပချက်များကိုလည်း သိထားသင့်သည် ။ virus တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး အပေါ်ယံတူသယောင် ထင်ရသော်လည်း အလုံးစုံတူဖို့ ဆိုသည်မှာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၊
မျိုးစိတ်တစ်ခုထဲမှာပင်လျှင် အသွင်ကွဲ ဗီဇပြောင်းများရှိကြောင်း ဆိုကြသည် ။ မျိုးဗီဇထပ်တူမဟုတ်လျှင် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်း ၊ H1N1 ကိုကာကွယ်နိုင်သည့် antibody သည် H1N5 ကိုမကာကွယ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြကြခြင်းကိုလည်း သတိပြုဖို့လိုသည် ။
လူမျိုး၏ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်် ၊ antibodies များကြောင့် မဟုတ်လျှင်တော့ ရောဂါမကူးစက်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းသည် တစ်ခုသာရှိတော့သည် ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ နှုတ်ကပါဌ်တော် ပရိတ်တရားတော်များ၏ အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ရမည် ။
ယခုအချိန်တွင် မြန်မာပြည်တွင် အရိယာများ မဆိတ်သုဉ်းသေး ။ လူများ ကိုယ်ကျင့်သီလ ပျက်နေကြပြီဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း အရိယာများ ၊ သီလသမာဓိစင်ကြယ်သူများ မြန်မာပြည်တစ်နံတစ်လျား အမြောက်အများရှိသေးသည် ။
သူတို့၏ မေတ္တာစွမ်းအား ၊ သူတို့ရွတ်ဖတ်ကြသည့် ပရိတ်တရားတော်၏ အစွမ်းက မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ကပ်ဆိုးကြီးများမကျရောက်ရလေအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်မှာ သေချာသည် ။
ဘုရားရှင်လက်ထက်တော် ဝေသာလီပြည်တွင် ဘေးဆိုးကပ်ဆိုးကြီး ကျရောက်သည့်အခါတွင်လည်း ဘုရားရှင်က ရတနာ့သုတ်ပရိတ်ကို ရှင်အာနန္ဒာအားသင်ကြားပေးပြီး ရွတ်ဖတ်စေသောကြောင့် ထိုကပ်ဆိုးကြီး ကင်းငြိမ်းသွားခဲ့ဖူးသည် ။
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး ၊ ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး တိုိ့လက်ထက်တော်ကလည်း မြန်မာပြည်တွင် ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးများ ကျရောက်သည့်အခါ ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်ပေးပြီး လူအပေါင်းအား ဘေးအန္တရာယ်ဆိုးကြီးမှ ကယ်တင်ပေးခဲ့ဖူးသည် ။
တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ကြီးကလည်း မုန်တိုင်းမျက်စိထဲ စိတ်ညွှတ်ပြီး မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်း ပြောင်းသွားအောင် စွမ်းဆောင်ပေးကြောင်း ကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားသည်ကို ကြားဖူးခဲ့သည် ။
မိုးခေါင်သည့်အခါ အခါမဲ့မိုးရွာသွန်းအောင် ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ပြီး စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သော လယ်တီဆရာတော်ကြီးကဲ့သို့ အရိယာများ သမိုင်းတွင် အထင်အရှားရှိခဲ့ဖူးသည် ။
ထိုကဲ့သို့ သူတော်ကောင်းများ၏ မေတ္တာရိပ်အောက်တွင် နေထိုင်ကြရသော မြန်မာလူမျိုးများ ကံကောင်းကြပါသည် ။
ဝိပဿနာထွန်းကားသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်သောကြောင့် ဝိပဿနာတရားအားထုတ်သူအသီးသီး၏ ပထမဇောများက သူ့မိသားစု ၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူအများ ကပ်ဆိုးကြီးမှ ကင်းဝေးအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ကြပါလိမ့်မည် ။.
ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီး ငါးပါးသီလ လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းခြင်း ၊ ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်နာကြားခြင်း ၊ ဝိပဿနာတရား အားထုတ်ခြင်းတို့ကို ယုံယုံကြည်ကြည် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဝူဟန်ကပ်ဆိုးကြီးကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မည် ။
တိဗက်ဒေသမှလွဲ၍ တရုပ်ပြည်တစ်ပြည်လုံး ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ၊ ထိန်းချုပ်ဖိုိ့ ခက်ခဲနေကြောင်း ဝူကျင့်ဖျင်၏ ဝန်ခံချက်ကလည်း ထိုအချက်မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေတစ်ခု ဖြစ်ပါသည် ။
သို့အတွက် antibodies များကြောင့် ၊ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်် မကူးစက်နိုင်ဟု တရားသေမှတ်ယူပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနေကြဘဲ ကျန်းမာရေးဋ္ဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များကို
အပြည့်အဝ လိုက်နာရင်း တစ်ဖက်ကလည်း ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်နာယူပြီး ဝိပဿနာတရားကို ပို၍ကြိုးကြိုးစားစား အားထုတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည် ။
ဓမ်မရိပျလှမျးသဖွငျ့ ကပျဘေးကငျးသညျ့ တိုငျးပွညျ
ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျပဲ ဖွဈဖွဈ ၊မညျသညျ့ဘာသာဝငျပဲ ဖွဈဖွဈ ကပျသုံးပါးကိုတော့ အားလုံးကွောကျရှံကွပါလိမျ့မညျ ။ မိမိတို့ လူသားမြိုးနှယျအားလုံး အတုနျးအရုနျး သဆေုံးရသညျ့ အဖွဈဆိုးမြိုးကို တော့ မညျသညျ့ဘာသာဝငျမြှ လိုလားကွလိမျ့မညျမဟုတျပါ ။
ယခုအခြိနျ၌ တရုပျပွညျ ဝူဟနျမွို့မှ စတငျခဲ့သော corona virus ကွောငျ့ တဈကမ်ဘာလုံး ခြောကျခြားနကွေရပွီ ။
တရုပျပွညျတှငျသာမက ကမ်ဘာ့နိုငျငံ ၇၀ ကြျောအထိ ရောဂါပိုးက ပြံနှံ့နပွေီး ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါဆိုးကွီး Pendamic disease အသှငျပွောငျးလာနပွေီ ။ ကပျရောဂါဆိုးကွီး pendamic တဈခုအဖွဈ ကမ်ဘာကွီးကို ခွိမျးခွောကျနပွေီဖွဈသညျ
။မွို့တှပေိတျ ၊ ကြောငျးတှပေိတျနှငျ့ ရောဂါကူးစကျမှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ကွိုးစားနကွေရသညျ ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးတှလေညျး ရပျတနျ့ကုနျကွပွီ ။ ရောဂန်တရကပျနောကျဆကျတှဲအနဖွေငျ့ စီးပှားပကျြကပျ ၊ ငတျမှတျခေါငျးပါးသညျ့ ဒုဗ်ဘိက်ခ န်တရကပျ လာလိမျ့ဦးမညျ ။ ငတျလာကွလြှငျ ကမ်ဘာမီးလောငျ သားတောငျခနြငျးဆိုသညျ့အတိုငျး လုယကျသတျဖွတျကွလိမျ့ဦးမညျ ။
ထိုအခါ စဈမကျဘေးအန်တာရာယျ သတ်တန်တရကပျ လာလိမျ့ဦးမညျ ။ ထိုကွောကျစရာကပျဆိုးကွီးတှေ၏ အရိပျမညျးကွီး လူသားတှအေပျေါ လှမျးခွုံစပွုလာပွီ ။
ထိုကပျဆိုးကွီးမြားမှ လှတျမွောကျနိုငျဖို့ မိမိတို့အားလုံး သတိရှိဖို့လိုသညျ ။ ရောဂါဖွဈခွငျး ၊ စီးပှားပကျြခွငျး ၊ သဆေုံးရခွငျး တို့သညျ ဘဝမြားစှာက မိမိတို့ပွုလုပျထားခဲ့သော အပရာပရိကကံတှကွေောငျ့ဖွဈသညျ ။ နောကျမှအရိပျလိုလိုကျနသေညျ့ ထိုကံမြားကို့တားနိုငျမှဖွဈမညျ ။
ထိုကံမြားကို တားနိုငျသညျက ဝိပဿနာအားထုတျသညျ့ ”ပထမဇော”ဟု မိုးကုတျဆရာတျောကွီးက ဟောကွားခဲ့သညျ ။ ပထမဇောထဲတှငျ ကံလညျးပါသညျ ၊ ဉာဏျလညျးပါသညျ ။
ထိုကံ ၊ ဉာဏျတို့ဖွငျ့ နောကျကလိုကျလာသညျ့ ကံတှကေို တားနိုငျသညျဟု ဆရာတျောဘုရားကွီး အမိနျ့ရှိဖူးသညျ ။ ထို့ကွောငျ့ ကပျဆိုးကွီးမြားမှ လှတျမွောကျနိုငျဖို့ ဝိပဿနာတရား အားထုတျကွပါဟု တိုကျတှနျးခငျြသညျ ။
ယခုအခါ ဝူဟနျဗိုငျးရပျက တကမ်ဘာလုံးနီးပါး ပြံနံှံ့နပွေီ ။ စင်ျကာပူ ၊ ကိုးရီးယား ၊ ဂပြနျနိုငျငံမြားဆီ ရောဂါပိုးမြား ရောကျသှားသညျ့ အပွငျ အီရနျကနျြးမာရေး ဒုဝနျကွီး ၊ အီရနျဒုသမ်မတတို့ကိုပါ ခမျြးသာမပေး ။
တရုပျနှငျ့ အဆကျအဆံမရှိသညျ့ အီတလီထိလညျး ခရီးဆနျ့သှားကွပွီ ။ သို့ပမေဲ့ ကီလိုမီတာ နှဈထောငျကြျော နယျနိမိတျခငျြး ဆကျစပျနပွေီး တရုပျလူမြိုးတှနှေငျ့ ထှေးရောယှကျတငျ ကူးလူးဆကျဆံနကွေသညျ့ တရုပျနှငျ့ အိမျနီးခငျြး မိမိတို့နိုငျငံမှာတော့ ရောဂါကူးစကျသညျကို မကွားရသေး ။
ပထမတော့ မွနျမာပွညျတှငျ သသေခြောခြာ တိတိကကြ တိုငျးတာနိုငျသညျ့ ပစ်စညျးကရိယာမြား မရှိသောကွောငျ့သျောလညျးကောငျး ၊ဆေးပညာကြှမျးကငျြမှု မရှိသောကွောငျ့ သျောလညျးကောငျး ကူးစကျနခွေငျးကို မသိခွငျးသာဟု ထငျခဲ့မိသညျ ။
သို့ပမေဲ့ ယခုမတျလထဲရောကျသညျအထိ ရောဂါကူးစကျမှု ၊ သဆေုံးမှုတို့ကို မကွားရသေး ။ အကယျ၍ ရောဂါဖွဈပှားမှု ၊ သကွေပေကျြစီးမှုသာ ရှိခဲ့လြှငျ လငျမယားရနျဖွဈသညျကအစ face book တငျနသေညျ့ ယခုလို ပှငျ့လငျးမွငျသာ မီဒီယာခတျေကွီးတှငျ face book ပျေါတှငျ ပလူပြံနလေောကျပွီ။
မညျသညျ့အဖှဲ့အစညျးကမှ ဖုံးဖိထား၍ ရမညျမဟုတျ ။ အမှနျတကယျ ကူးစကျမှု ၊ ရောဂါကွောငျ့ သကွေပေကျြစီးမှု မရှိ၍သာ face book ပျေါတှငျ မတှရေ့ခွငျးဖွဈသညျ ။
UK ၏ နာမညျကွီးသတငျးစာ The Sun ကလညျး မတျလ ၃ ရကျနထေု့တျ သတငျးစာတှငျ မွနျမာနိုငျငံကို ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကငျးစငျသာ နိုငျငံအဖွဈ ဖျောပွလိုကျသညျကို ဖတျလိုကျရသညျ ။
တဈကမ်ဘာလုံးကို ကူးစကျပွနျ့ပှားနပေါလြှကျ မွနျမာလူမြိုးတှမှော မကူးစကျမပွနျ့ပှားခွငျးသညျ အလှနျအံသွောစရာ ကောငျးလှနျးသညျ့ ထူးခွားခကျြ တဈခုဖွဈနသေညျ ။ထိုထူးခွားခကျြနှငျ့ ပတျသကျပွီး Kelvin Albert Power ၏ ထငျမွငျယူဆခကျြ ( hypothesis) တဈခုကို ဖတျမိလိုကျသညျ ။
သူက မွနျမာလူမြိုးတို့၏ သှေးထဲတှငျ corona virusကိုကာကှယျပေးနိုငျသညျ့ antibody တဈမြိုးမြိုး အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ အလိုလိုရှိနှငျ့နသေောကွောငျ့ဟု ယူဆသညျ ။ တခွားလူမြိုးမြားထံတှငျ မတှရေ့သလောကျနညျးသျောလညျး မွနျမာလူမြိုးတိုငျး၏ သှေးထဲမှာသာလြှငျ အမြားဆုံးတှရေ့သညျ့
( Ede 1-C 10 ၊ Ede2-A11 ၊ Ede2- B7) ဆိုသညျ့ human antibodies သုံးမြိုးထဲက တဈမြိုးမြိုးကွောငျ့ corona virusကို ကာကှယျနိုငျစှမျး ရှိနခွေငျး ဖွဈနိုငျသညျတဲ့ ။
ညဈပတျစုတျပွတျသညျ့ မွောငျးပုတျရပေုတျတှမြေားသညျ့ တိုငျးပွညျဆိုတော့ ခွငျအကိုကျမခံရသညျ့ မွနျမာလူမြိုးဟုမရှိ ။ ရဆေိုးအိုငျတှထေဲ ပေါကျဖှားရှငျသနျကွပွီ
း နခေ့ငျးနလေ့ညျ ထှကျကိုကျတတျသညျ့ ခွငျပုနျးမြားက သယျဆောငျလာသညျ့ သှေးလှနျတုပျကှေး ( Dengue) ရောဂါကို ဖွဈစတေတျသော ဗိုငျးရပျပိုးလေးမြိုးကို ခုခံကာကှယျဖို့အတှကျ မွနျမာလူမြိုးမြား၏ ခုခံမှုစနဈထဲတှငျ ထိုantibodies မြား ရှိနှငျ့နပွေီး ဖွဈသညျတဲ့ ။
တိုးတကျသညျ့နိုငျငံမြား ၊ ရာသီဥတုအေးခမျြးသညျ့ နိုငျငံတှေ၌ ခွငျမရှိသောကွောငျ့ ထိုနိုငျငံရှိလူမြား၏ သှေးထဲတှငျ ထိုantibodiesမြားမရှိ ။ ထို့ကွောငျ့ တရုပျ ၊ ဂပြနျ ၊ အီတလီ ၊ ကိုးရီးယား ၊ အင်ျဂလိပျ ၊အမရေိကနျ နိုငျငံသားမြား၏ ကိုယျခံအားစနဈထဲတှငျ ထို antibodiesမြားမရှိကွ ။
သို့ပမေဲ့လညျး ခွငျပေါသညျ့ တိုငျးပွညျမြားတှငျ နထေိုငျကွရသညျ့ မွနျမာ ၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နှငျ့ လာအိုလူမြိုးတို့တှငျတော့ အမြားအပွားရှိသညျ ။ ထို့ကွောငျ့ တဈကမ်ဘာလုံး ရောဂါကူးစကျနသေျောလညျး မွနျမာ ၊
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ၊ လာအို ၊ ဘရူနိုငျးနှငျ့ အရှတေီ့မောတို့တှငျ ယခုထိရောဂါကူးစကျမှု မရှိသေးခွငျး ဖွဈသညျတဲ့ ။
ပွီးတော့ သှေးလှနျတုပျကှေး ဖွဈစသေညျ့ virus နှငျ့ corona virus နှဈမြိုးစလုံးသညျ single strand RNA virus တှေ ဖွဈကွသညျတဲ့ ။ ပွီးတော့ မကျြနှာပွငျပျေါရှိ ပရိုတိနျးအမြိုးအစားကလညျး တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ သှားတူနပေါသတဲ့ ။
သညျတော့ သှေးထဲရှိ antibodies မြားက ဝူဟနျကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈကို သှေးလှနျတုပျကှေး ဗိုငျးရပျဈလို့ အမှတျမှားပွီး မှားယှငျးတိုကျခိုကျမိတာ ဖွဈနိုငျပါတယျတဲ့ ။ ဒါကွောငျ့ မွနျမာတှေ ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈ ကူစကျခံရစဦေးတော့
သှေးထဲရှိ antibodiesတှရေဲ့ တိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ ဗိုငျးရပျဈသသှေားသညျ့အတှကျ ရောဂါကူးစကျပွနျ့ပှားမှု မရှိခွငျး ဖွဈနိုငျပါသညျတဲ့ ။ သု့အယူအဆအရဆိုလြှငျ ဆငျးရဲသားဖွဈခွငျးကိုပဲ ဂုဏျယူရတော့မလိုလို ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ သူ့အယူအဆသာ မှနျလြှငျတော့ မွနျမာတှေ လကျခမောငျးခတျသငျ့ပွီ ။တခွားလူမြိုးတှမှော မရှိဘဲ မိမိတို့သှေးတှငျးမှာသာ ရှိသညျ့ antibodies မြားသညျ ဘုရားပေးသညျ့ဆုဟု ဆိုရမလိုဖွဈနပွေီ ။
သို့ပမေဲ့ သူ၏တငျပွခကျြသညျ ထငျမွငျယူဆခကျြ hypothesis တဈခုသာဖွဈသညျ ။ သုတသေနခိုငျခိုငျမာမာနှငျ့ တှရှေိ့ခကျြတဈခု မဟုတျပါ ။ အမှနျတရားဟု လှနေံဓားထဈ ယူဆ၍တော့မရပါ ။
ဝမျးသာစရာဟု ဆိုနိုငျသျောလညျး ငါတို့မကူးနိုငျဘူးဟု ယူဆကာ ပေါ့ပေါလြော့လြော့ မနသေငျ့ပါ ။ မကူးစကျနိုငျဟုထငျပွီး ကာကှယျရေးလုပျငနျးမြားကို လဈြလြူရှုကာ ပေါ့ပေါ့ဆဆ နလြှေငျတော့ ကံကိုယုံပွီး ဆူးပုံနငျးသလို ဖွဈနပေါလိမျ့မညျ ။
ထို့ပွငျ ထိုယူဆခကျြသညျ အခွအေမွဈမရှိကွောငျး ၊ ဖွဈနိုငျခွမေရှိကွောငျး အခွားဆေးသိပ်ပံပညာရှငျတို့၏ ခပြေခကျြမြားကိုလညျး သိထားသငျ့သညျ ။ virus တဈမြိုးနှငျ့တဈမြိုး အပျေါယံတူသယောငျ ထငျရသျောလညျး အလုံးစုံတူဖို့ ဆိုသညျမှာ လုံးဝမဖွဈနိုငျကွောငျး ၊
မြိုးစိတျတဈခုထဲမှာပငျလြှငျ အသှငျကှဲ ဗီဇပွောငျးမြားရှိကွောငျး ဆိုကွသညျ ။ မြိုးဗီဇထပျတူမဟုတျလြှငျ ကာကှယျနိုငျစှမျးမရှိကွောငျး ၊ H1N1 ကိုကာကှယျနိုငျသညျ့ antibody သညျ H1N5 ကိုမကာကှယျနိုငျကွောငျး တငျပွကွခွငျးကိုလညျး သတိပွုဖို့လိုသညျ ။
လူမြိုး၏ မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့ ၊ antibodies မြားကွောငျ့ မဟုတျလြှငျတော့ ရောဂါမကူးစကျရခွငျး၏ အကွောငျးရငျးသညျ တဈခုသာရှိတော့သညျ ။ မွတျဗုဒ်ဓ၏ နှုတျကပါဌျတျော ပရိတျတရားတျောမြား၏ အစှမျးကွောငျ့ဖွဈရမညျ ။
ယခုအခြိနျတှငျ မွနျမာပွညျတှငျ အရိယာမြား မဆိတျသုဉျးသေး ။ လူမြား ကိုယျကငျြ့သီလ ပကျြနကွေပွီဟု ဆိုနိုငျသျောလညျး အရိယာမြား ၊ သီလသမာဓိစငျကွယျသူမြား မွနျမာပွညျတဈနံတဈလြား အမွောကျအမြားရှိသေးသညျ ။
သူတို့၏ မတ်ေတာစှမျးအား ၊ သူတို့ရှတျဖတျကွသညျ့ ပရိတျတရားတျော၏ အစှမျးက မွနျမာပွညျသူပွညျသားမြား ကပျဆိုးကွီးမြားမကရြောကျရလအေောငျ ကာကှယျပေးနိုငျလိမျ့မညျမှာ သခြောသညျ ။
ဘုရားရှငျလကျထကျတျော ဝသောလီပွညျတှငျ ဘေးဆိုးကပျဆိုးကွီး ကရြောကျသညျ့အခါတှငျလညျး ဘုရားရှငျက ရတနာ့သုတျပရိတျကို ရှငျအာနန်ဒာအားသငျကွားပေးပွီး ရှတျဖတျစသေောကွောငျ့ ထိုကပျဆိုးကွီး ကငျးငွိမျးသှားခဲ့ဖူးသညျ ။
လယျတီဆရာတျောဘုရားကွီး ၊ ဝဘေူဆရာတျောဘုရားကွီး တိုိ့လကျထကျတျောကလညျး မွနျမာပွညျတှငျ ရောဂါကပျဆိုးကွီးမြား ကရြောကျသညျ့အခါ ပရိတျတရားတျောမြား ရှတျဖတျပေးပွီး လူအပေါငျးအား ဘေးအန်တရာယျဆိုးကွီးမှ ကယျတငျပေးခဲ့ဖူးသညျ ။
တောငျတနျးသာသနာပွုဆရာတျောကွီးကလညျး မုနျတိုငျးမကျြစိထဲ စိတျညှတျပွီး မုနျတိုငျးလမျးကွောငျး ပွောငျးသှားအောငျ စှမျးဆောငျပေးကွောငျး ကိုယျတိုငျမိနျ့ကွားသညျကို ကွားဖူးခဲ့သညျ ။
မိုးခေါငျသညျ့အခါ အခါမဲ့မိုးရှာသှနျးအောငျ ပရိတျရှတျဖတျပွီး စှမျးဆောငျပေးနိုငျခဲ့သော လယျတီဆရာတျောကွီးကဲ့သို့ အရိယာမြား သမိုငျးတှငျ အထငျအရှားရှိခဲ့ဖူးသညျ ။
ထိုကဲ့သို့ သူတျောကောငျးမြား၏ မတ်ေတာရိပျအောကျတှငျ နထေိုငျကွရသော မွနျမာလူမြိုးမြား ကံကောငျးကွပါသညျ ။
ဝိပဿနာထှနျးကားသညျ့ တိုငျးပွညျဖွဈသောကွောငျ့ ဝိပဿနာတရားအားထုတျသူအသီးသီး၏ ပထမဇောမြားက သူ့မိသားစု ၊ သူ့ပတျဝနျးကငျြရှိ လူအမြား ကပျဆိုးကွီးမှ ကငျးဝေးအောငျ စှမျးဆောငျပေးနိုငျကွပါလိမျ့မညျ ။.
ထို့ကွောငျ့ ဘုရားရှငျကို ယုံကွညျကိုးကှယျပွီး ငါးပါးသီလ လုံခွုံအောငျ စောငျ့ထိနျးခွငျး ၊ ပရိတျတရားတျောမြား ရှတျဖတျနာကွားခွငျး ၊ ဝိပဿနာတရား အားထုတျခွငျးတို့ကို ယုံယုံကွညျကွညျ ပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ ဝူဟနျကပျဆိုးကွီးကို ရှောငျရှားနိုငျပါလိမျ့မညျ ။
တိဗကျဒသေမှလှဲ၍ တရုပျပွညျတဈပွညျလုံး ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈ ပြံ့နှံ့သှားပွီဖွဈကွောငျး ၊ ထိနျးခြုပျဖိုိ့ ခကျခဲနကွေောငျး ဝူကငျြ့ဖငျြ၏ ဝနျခံခကျြကလညျး ထိုအခကျြမှနျကနျကွောငျး သကျသတေဈခု ဖွဈပါသညျ ။
သို့အတှကျ antibodies မြားကွောငျ့ ၊ မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့ မကူးစကျနိုငျဟု တရားသမှေတျယူပွီး ပေါ့ပေါ့ဆဆ မနကွေဘဲ ကနျြးမာရေးဋ်ဌာနမှ ထုတျပွနျသော ကာကှယျရေးလမျးညှနျခကျြမြားကို
အပွညျ့အဝ လိုကျနာရငျး တဈဖကျကလညျး ပရိတျတရားတျောမြား ရှတျဖတျနာယူပွီး ဝိပဿနာတရားကို ပို၍ကွိုးကွိုးစားစား အားထုတျကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါသညျ ။
« ကျောက်ချဉ်ကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး နှင့် အသုံးဝင်ပုံများ	» စံပယ်(၉)ရွက် ဝမ်းကိုက်ပြတ်ဆေး